Usiza abantu ukuthi baqale izinhlelo zokusiza umphakathi | IOL Isolezwe
Usiza abantu ukuthi baqale izinhlelo zokusiza umphakathi
Isolezwe / 5 July 2012, 10:30am / LUNGI LANGA
UNKK Thandiwe MaMkhwanazi Zondi owazisungulela i Bondiswa FET College eCamperdown
ISIFISO sokubona abantu bangakubo bethuthuka kwezezimali senze owesimame obenguthisha iminyaka eminingi waqala isikhungo sokucija ngamakhono.
UNkk Thandiwe MaMkhwanazi Zondi (49) waseCamperdown ongumnikazi wekolishi lokucija ngamakhono, iBondiswa FET College, eseCamperdown, uthe ukubona kusekuncane lokhu asekwenzile ngokuqala leli kolishi.
Ukuliqala kwakhe kulandela ukushiya ukufundisa abesekwenze iminyaka engu-11.
Uthe yize ayekuthanda ukufundisa wabona kungcono ayeke ayosebenza ezinhlanganweni ezisiza abantu ngaphandle kokulindela ukukhokelwa, ama-NGO, okwamnika ithuba lokuzihlanganisa ezinhlelweni zokusiza umphakathi.
Uthe babesiza abantu ukuthi baqale izinhlelo zokusiza umphakathi baphinde babafundise ngokudlulisela ulwazi kwabanye.
“Kwenye inhlangano engangikuyo besisiza abantu ngokubafundisa ngesifo sengculazi nokuthi singanqandwa kanjani,” kusho uNkk Zondi.
Okuningi kwalokhu kwakungukufundisa abantu abazodlulisela ulwazi kubantu, isikhathi esiningi kwakuba ngonompilo ababevakashela amalungu omphakathi bezobachushisa ngezindlela zokugwema igciwane nokuthi bangenza kanjani uma sebelitholile. Babecija abantu ababezofundisa abantu abadala abenza i-Adult Basic Education and Training (ABET).
Ikolishi lakhe lenza okufanayo – licija abantu abadlulisela ulwazi kwabanye.
Uthe kunzima ukudlulisela ulwazi onalo kwabanye uma ungaqeqeshiwe kukho.
Kunabantu abanezinto abazaziyo okuthi uma sekufanele baludlulisele komunye umuntu bahluleke.
Ikolishi lakhe liqale ngo-2008 kodwa kuze kube manje lilokhu lidlondlobele. UNkk Zondi akagxilile ekucijeni labo abafuna ukudlulisa ulwazi kuphela kodwa ucija abantu abazimisele ukungena kwezamabhizinisi nabanamabhizinisi.
Uthe uba nemihlangano yasekuseni lapho ekhuthaza khona abesifazane ukuthi bangene kwezamabhizinisi.
“Kunabantu abanamakhono angabenzela imali kodwa kube wukuthi abazi ukuthi bangaqala kuphi ukuvula amathuba okuthi lokho kwenzeke,” kusho uNkk Zondi.
Wenze isibonelo ngabantu abafuyile nabalimayo kodwa abangazi ukuthi bangakwazi ukudayisa imikhiqizo yabo, bangagcini nje ngokuyikhulisela ukuthi idliwe emakhaya abo kuphela.
Uthe kuningi laba abangakwenza kepha abantu ngeke babe nalolu lwazi uma kungekho ozosukumela ukubanika lona.
Okunye akwenzayo wukusiza osomabhizinisi abasafufusa ukuthi bakwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo.
Usezinhlelweni zokuletha olunye uhlelo oluqondiswe ezinganeni ezincane lapho zizofundiswa amaqhinga okonga imali. Lokhu kuzohlanganisa ukubafundisa ngokuthi imali ibekwa kanjani baphinde bafundiswe ukupela nezibalo nokunye okuzoqinisa ulwazi lwabo lwezinto zesikole.
Uthe lolu hlelo ngeke lube seCamperdown kuphela kepha luzodlulela nakwezinye izindawo.
UNkk Zondi uthe izingane ezivela emindenini ehlwempu zivame ukungabi naye umuntu ozozisiza ekubekeni imali ngoba isikhathi esiningi imali esuke ikhona ekhaya kuba ngeyokuthenga ukudla kanti kubalulekile ukuthi noma kuthengwa ukudla babenalo ulwazi lokubeka leyo mali encane abanayo. Kodwa uhlelo akulona olwezingane ezivela emindenini ehlwempu kuphela. Lolu hlelo azolwenza ngokubambisana nelinye lamabhange aziwayo luzokwenza ukuthi ingane nengane isheshe ifunde ngokubaluleka kokonga nokuhlelela ikusasa.
Uthe ufisa ukubona ikolishi lidlondlobala lifana namakolishi amakhulu azimele asezenzele igama.